Mohamed Salah oo Taariikh ka Sameeyay Horyaalka Premier League Hadaba Muxuu Noqday ? – Gool FM
(Premier Leageu) 13 April 2018. Mohamed Salah ayaa loo magacaabay laacibka bishii March ee horyaalka Premier league kadib bandhigiisa wanaagsanaa ee uu ka sameynayo kooxda Liverpool.
Waa markii sedexaad ee uu abaalmarinta laacibka bisha ku guuleysanayo salah xili ciyaareedkan,wuxuu horay u qaaday bilihii November iyo February, wuxuuna sidaa ku noqday xidigii ugu horeeyay taariikhda horyaalka Premier League ee hal xagaa loo magacaabo abaalmarinta ciyaariyahanka bisha.
Tan iyo kusoo laabashadiisa England xagaagii lasoo dhaafay 25 sano jirkaan ayaa horumar kala duwan sameyay marka loo eego xiligiisii Chelsea wuxuuna reds kamid dhigay kooxaha afarta sare ee horyaalka.
Salah wuxuu la cajabayaa in ay kooxiisa 10 dhibcood ka sareeyso naadigiisii hore oo fadhisa kaalinka shanaad, halka Liverpool ay qasaartay hal ciyaar bishii lasoo dhaafay waana guuldaradii ay 2-1 kala kulmeen Manchester United.
Weeraryahanka ayaa dhaliayay lix gool afar kulan uu kooxdiisa u ciyaaray bishii lasoo dhaafay, wuxuuna goolashiisa bisha March kasoo bilaabay labadii gool ay Newcastle kaga adkaadeen Anfield.
Laacibka reer Egypt wuxuu ahaa mid aan si wanaagsan u cayaarain kulankii guuldarada ay kasoo gaartay kooxda Old Trafford laakiin kulankii xigay oo ay la ciyaareen naadiga Watford salah ayaa afar gool ka dhaliayay kulan 5-0 liverpool guusha ku raacday.
Salah wuxuu sido kale barbareeyay rikoorkii Didier Drogba ee ahaa ciyaariyahanka ugu goolasha bandan horyaalka Premier League ciyaartooyda kasoo jeeda qaarida africa waana 29 gool, kadib goolkii xiliga dambe uu ugu shubay kooxda Crystal Palace kulankii ka dhacay Selhurst Park.
Goolashiisii bisha March ayuu salah ku helayaa awood buuxa uu laacibka Tottenham Harry Kane kaga adkaan karo tartanka gool dhalinta.
Salah wuxuu hada hogaanka gool dhalita ku hayaa 29 gool wuxuuna afar ka sareeyaa xidiga kusoo xiga ee Kane halka sided goolna uu ka sareeyo dhaliyaha Manchester City Sergio Aguero xili shan kulan oo qura ay ka harsan tahay ciyaaraha Premier League.
DEG DEG: Isku aadka Semi Final-ka Champions League oo la sameeyay